मिर्गौलामा पत्थरी किन पर्छ? यसको उपचार कसरी गर्ने? (भिडिओ) :: Setopati
मिर्गौलामा पत्थरी किन पर्छ? यसको उपचार कसरी गर्ने? (भिडिओ) नुन धेरै खानेहरुलाई मिर्गौलामा पत्थरी पर्ने खतरा रहन्छ
डा.चितरञ्जन शाह, युरोलोजिष्ट
मृगौलामा पत्थरी सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई हुन्छ। यद्यपी हरेक उमेर समूह र महिला तथा पुरूषलाई हुने पत्थरीका कारणहरू फरक-फरक हुन्छन्।
नेपालमा मृगौलाको पत्थरी बढ्दो छ। सबैभन्दा बढी तराई क्षेत्रका मानिसमा पानीको कमीले पत्थरी हुनेगरेको पाइएको छ।
शरीरमा पानीको कमी हुँदा किड्नीको सिस्टममा समस्या आउँछ, जसले पत्थरी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा जन्मजात पत्थरी हुन्छ। युरीक एसिड बढ्यो भने पनि पत्थरी हुन्छ।
मृगौलामा पत्थरी हुने धेरै कारण भएसँगै उपचारको पद्धति पनि फरक फरक हुन्छन्। यसको उपचार पहिलेभन्दा अहिले धेरै फरक छ।
पहिला चिरफारको माध्यमबाट मात्र उपचार हुन्थ्यो भने अहिले मेसिनद्वारा बिना चिरफार पत्थरी निकाल्न सकिन्छ। पिसाबको थैली, नली र किड्नीको पत्थरी मेसिनको सहयोगले निकाल्न मिल्छ। पत्थरी सानो भएमा यो विधिबाट निकाल्न सकिन्छ। तर पत्थरी ठूलो भएमा सानो प्वाल पारेर त्यहाँ भएका ढुंगा फुटाएर बाहिर निकालिन्छ।
किड्नी कुन ठाउँमा छ र ढुंगा कडा छ कि, छैन भनेरसमेत उपचार विधिमा फरक हुनसक्छ।
जुनसुकै विधिबाट भए पनि बिरामीलाई कम बाधा हुनेगरी ढुंगा निकाल्न सकिन्छ। तर सतप्रतिशत ढुंगा भने जादैन। औसतमा ७० प्रतिशत मात्रै ढुंगा निख्रिन्छ। एकचोटी ढुंगा बन्यो भने फेरि पनि बन्नसक्छ।
दोहोर्‍याएर ढुंगा बन्न नदिन ढुंगा जाच्न पठाइन्छ। ढुंगा कस्तो केमिकलबाट बनेको छ भनेर परीक्षण गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ।
पत्थरी समस्या भएको व्यक्तिले के खाने के नखाने भन्ने पनि परीक्षण गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। पत्थरीको उपचार गरेपछि पानीको मात्रा बढाउनुपर्छ। पानी यतिउती खाने भन्दा पनि कम्तीमा २ लिटर पिसाब फेर्नुपर्छ। त्यो आफू बस्ने ठाउँ र मौसममा भरपर्छ।
पत्थरीको समस्याबाट जोगिन नुनको मात्रा कम गर्नुपर्छ। नुनको मात्रा कम गरेमा पत्थरी बन्न धेरै कम हुन्छ। यो सँगै तौलमा नियन्त्रण हुनुपर्छ, पानीको मात्रा बढाउनुपर्छ भने प्रोटिनयुक्त खाना कम खानुपर्छ।
मृगौलामा पत्थरी भयो भने कतिपय अवस्थामा लक्षण नदेखिन सक्छ। मृगौलामा पत्थरी हुँदा कोखा दुख्छ अनि पछाडि पिठ्यूँमा सर्छ। पिसाबको नलीमा पत्थरी परेको छ भने त्यसको दुखाइ कोखाबाट तल इनर थाइमा दुख्छ। पिसाब थैलीमा पत्थरी पर्‍यो भने पिसाब रोकीने र लिंगको टुप्पामा दुख्ने हुन्छ। त्यस्तै पिसाबमा रगतसमेत देखिन्छ।
यसै विषयमा हामीले वीर अस्पतालमा कार्यरत युरोलोजिष्ट डा. चितरञ्जन शाहसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौ।
प्रस्तुतिः सन्जिब बगाले
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २, २०७७, २३:२३:००
प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध पुनरावलोकनमा जान वकिलहरूको सुझाव
सर्वोच्चको फैसलापछि कसले के भने?
अब एमाले ब्युँताएर छिट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउँछुः प्रधानमन्त्री ओली
टीकाराम भट्टराईले दिए नेकपाबारे सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न सकिने तीन आधार
अब संसदमा चार दल अस्तित्वमा, कसको कति सिट?
प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित
खुट्टामा जन्जीरको ताला लगाएर नागरिक समाजको मार्चपास
को हुन् सर्वोच्चको निर्णयबाट नेकपा फिर्ता लैजाने ऋषि कट्टेल?
धुलिखेल अस्पताललाई एनसेलले दियो टेलिमेडिसिन उपकरण
ग्रिनविचकी मेयरले गरिन् उलविच लेट नाइट फार्मेसीको तारिफ
ललितपुर महानगरले थाल्यो निः शूल्क चिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
नर्भिक अस्पतालमा नयाँ ओपिडी सेवा शुरु
नोबेलमा दुरबिन र नेभिगेशनबाट थोरै टाउको खोली ब्रेन ट्युमर र ब्रेन ह्यामरेजको शल्यक्रिया
सर्वोच्चको उत्ताउलो फैसला सम्पादकीय
माइ भजाइना विल भोट यु आउटः अश्लीलता कि विद्रोह? जीवन क्षेत्री
जसको विश्वास नगर्नू भनियो, ती मेरै वरपरका मान्छे थिए क्रान्तिशिखा धिताल
हिन्दु धर्मले स्विकारेको समलैंगिक सम्बन्ध भिक्षु कश्यप
नारी दिवस र नेपाली समाज गीता अर्याल पाण्डे
प्रायः महिलाहरु सुनका गहना भनेपछि भुतुक्कै किन! अच्युत शाली घिमिरे
...अनि आफूलाई अफ्रिकन भएर नजन्मेकोमा 'भाग्यमानी' सम्झें निर्जला अधिकारी
शैतानको झोले कि शिवको भोले डा. सुबास लोहनी
तिमी नारी हौ- हाँस्न पाउँदैनौ! कौशल काफ्ले
मेरी हजुरआमा अनिल बराल
चाहिँदैन एक दिनको नारी दिवस सुनिता ढकाल
प्रश्न तिमीलाई सपना घिमिरे
विदेश जाने श्रमिकलाई कोभिडको भ्याक्सिन कहिले रोहन गुरुङ
एउटा जिउँदो सहिदको पत्र दिपक रोका